Global Voices teny Malagasy » Shina: Mifampihaika Amin’ny Lasiroan’Antoko · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Marsa 2012 11:13 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fahalalahàna miteny, Hehy, Hevitra, Mediam-bahoaka
Ny antsoina hoe 50 Cent Party  na lasiroan'antoko dia ireo mpaneho hevitra an-tserasera indramin'ny Fitondram-panjakana Shinoa na indramin'ny antoko komonista shinoa entina hanefena ny fihevi-bahoaka. Matetika moa ireo Lasiroan'Antoko ireo milaza izay mpitsikera henoin-teny ho mpamadika ny tanindrazana.
Tamin'ny 26 Febroary, ny mpisera Sina Weibo  Zhang Nong dia nanapa-kevitra hifampihaika ankarihary  amin'ny Lasiroan'Antoko amin'ny alalan'ity lahatsoratra sy sary manaraka ity:
Ny sary etsy ankavia dia fandrafetana indray ny marika famantarana ny hetsika komonista, ny maritoa sy ny antsim-bilona. Navadik'i Zhang ho marik'isa arabo “5”, marika famantarana ny Lasiroan'Antoko, ny fitaovam-piadian'ny revolisiona sosialy. Voazara nihoatra ny in-1800 sy nahazo fanehoan-kevitra 560 ity randran-dresaka  ity teo amin'ny sehatra nisy azy. Nampiseho ny fanohanany an'i Zhang ny ankamaroany , raha miezaka ny hamaly bontana kosa ny mpamaky sasany:
wendySF：Sainan'ny Lasiroan'Antoko? Famoronana vaovao? Manantena aho fa hiaina mandrakizay amin'ity fiarahamonina derainy ity izao taranaka Lasiroa izao sy ny manaraka. Aza manao tahaka an'i Sima Nan , izay manameloka an'i Etazonia  nefa nandefa ny vadiny sy ny zanany lahy honina any. Sima no karazan'ny Lasiroan'antoko.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/03/04/29699/
 dia nanapa-kevitra hifampihaika ankarihary: http://weibo.com/1037653695/y7gVlkcgA
 manameloka an'i Etazonia: https://globalvoicesonline.org/2012/01/26/china-anti-american-warrior-gets-head-stuck-in-dc-airport-escalator/